यि ७ कुरा सेक्सका लागि घातक छ है - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / कामशास्त्र / यि ७ कुरा सेक्सका लागि घातक छ है
खबरडेस्क,२४ चैत ।
बिहानको यौन सम्बन्ध स्वास्थ्यको लागि फलदायी
२. बिदाको समयमा धेरैबेरसम्म सुत्नु
३. तपाईं हप्ताको सातै दिन सँगै हुनुहुन्छः
४. तपाईंले पिल्स खाइरहनुभएको छ भनेः
५. निरन्तर व्यायाम नगर्नालेः
६. सुत्ने बेलामा समाचार पढ्नुहुन्छ भनेः
आफ्नो पार्टनरसँग बेडमा केहि वाइल्ड गर्नु भनेको राम्रै हो तर त्यसलाई साँचो र प्राकृतिक बनाउन पनि निकै जरुरी छ । पोर्न फिल्मले तपाईंलाई धेरै आशा गर्ने बानी बसालिदिन्छ । ‘आफूले कुनै फिल्ममा सेक्सुयल र सिडक्सन कार्यहरु देखेकै भरमा यसले तपाईंको पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने छैन,’ डा। राजन भोस्लेले बताए । माया र आदर हराउन नदिनुहोस् ।
सेक्सको भरिपूर्ण आनन्द लिन आफूले हेरेका भिडियोभन्दा आफ्नै शैली प्रयोग गर्नुहोस् । ‘दिनदिनै आत्मियताका लागि गरिने कार्यहरु जस्तै किसिङ्ग र अंगालोले बेहेर्नेजस्ता कार्य गर्नाले पनि तपाईंको पार्टनरलाई केहि रमाइलो गर्न मन हुन्छ, ’ भोस्लेले जानकारी दिए ।